Jumlada iPhone 12 taxanaha Corning Gorilla muraayadda muraayadda muraayadda soosaaraha iyo alaab-qeybiye | OTAO
Ku dhowaad 170 sano, Corning wuxuu isku darsaday khibraddiisa aan la qiyaasi karin ee sayniska dhalada, cilmiga dhoobada, iyo fiisigiska muraayadaha oo leh wax soo saar qoto dheer iyo karti injineernimo si loo horumariyo hal-abuurka iyo badeecooyinka nolosha beddelaya.
Si loo bixiyo tayo sare leh ilaaliyaha galaaska, OTAO waxay diirada saareysaa sameynta gaashaan ilaaliyaha galaaska si ay ula kulanto macaamiisha kala duwan ee adduunka ugu baahan.
Si gaar ah looga sameeyay Corning's Gorilla Glass ilaaliyahaan wuxuu ku faanaa ilaalinta shaashadda kama dambaysta ah, iyadoo la ilaalinayo daahfurnaanta shaashadda ugu fiican iyo dareenka taabashada.
Muddo dheer, xoog badan
muraayadda korningku waxay kaa caawineysaa inaad ka ilaaliso shaashadahaaga iPhone dhibcaha, saamaynta, iyo xirashada maalinlaha ah. Gorilla Glass waa ka adag yahay biraha caadiga ah ee aad ka heli doontid furayaasha iyo mindiyo, wuuna xamili karaa in dhulka lagu tuuro dhowr jeer.
Ilaalinta Qummanaanta FIT
Waa sax cut si ay si fiican u haboon iPhone.
Naqshadeynta goynta saxda ah waxay noqon kartaa ilaaliyaha taleefankaaga si ka wanaagsan, oo ku habboon inta badan noocyada kiisaska dhammaantood.
OTAO Corning bakhtiyo Gorilla Glass Faa'iidada
Waxaa laga sameeyay shatiga Corning Gorilla Glass
Waxay bixisaa nuugid saameyn sare leh iyo iska caabin xoqan.
Ilaalin xoog leh oo xoog leh oo leh ilaa 2x iska caabin xoqan oo ka weyn tan beddelka dhalada ah *
Dhumucda Ikhtiyaariga ah: 0.33mm, 0.2mm, 0.1 mm.
Rakibaadda filimka OTAO waa mid aad u fudud oo ku habboon. Haddii aad tixgelineyso boosteejada, waxaad sidoo kale dooran kartaa codsadeheena (sidoo kale loo yaqaan saxaarad rakibidda) si uu uga caawiyo rakibidda. Xitaa macaamil aan lahayn khibrad filim wuxuu si fudud filim ugu dul dhigi karaa.
OTAO dhamaan ilaaliyaha shaashadda muraayadda leh ama filimku waxay bixiyaan saameyn gees ilaa gees ah iyo burburin difaac. Guud ahaan, haddii taleefankaagu uu si kadis ah dhulka ugu dhaco oo uu si adag u garaaco OTAO gaashaanka muraayadda muraayadda muraayadda leh ee ka hortagga inuu burburo. Marka, taleefankaagu wuxuu ka soo dhacayaa dherer cayiman adigoon waxyeello u gaysan doonin jajabyada muraayadda.
Ilaalinta xoqida ugu badan
OTAO Muraayadda Daaraysan waxay isticmaashaa shay galaas qiimo sare leh iyo daaweyn adag oo khaas ah.
Daaweynta Daaweynta Daaweynta Daaweynta Daaweynta Daaweynta Daaweynta 'Oleo-phobic'
Dhibaatada faraha ayaa runtii wax laga xumaado ah maxaa yeelay waxay yareysaa muuqaalka shaashadda. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dhibaatooyin sida buufin biyo ah iyo saliid faleebo ah, taas oo xaaladda ka dhigeysa mid sii xumaaneysa
Laakiin waxyaalahan kuma dhacaan OTAO ilaaliyaha shaashadda muraayadda leh ee muraayadda ah Marka qoritaanka iyo taabashada dusha taleefanka ayaa aad uga fudud dhibna aan lahayn.
Waxaan u adeegsanaa buufinta plasma iyo geedi socodka koronto siinta si siman loogu buufiyo saliida faraha ee laga keenay Japan filimka muraayada si loo gaaro biyo-biyood habeysan, saameyn biyo-iyo ceeb-celin.
Hore: iPhone 12 taxane kamarad ilaaliyaha muraayadda muraayadda ah
Xiga: iPhone 12 taxane Lens Ilaaliyaha Ilaaliyaha
Samsung S21 Plus 2.5D Glue Muusiga Muraayadda ...
2.5D Matte Gargaaraha Shaashadda ee taxanaha Apple iPad
IPhone 12 taxane 2.5D asturnaanta sirta muraayadda sc ...
IPhone IPhone 2.5D PMMA shaashadda waligeed ma jabin ...
iPad Pro 11 ″ 2020 Muraayadaha Muraayadaha Muraayadaha P ...
Samsung S21 Plus 2.5D Cover Buuxda Dabeecad ...